Ingaba wenza izinto wena okanye usebenza kunye neqabane, ndingathanda ukunikela iingcebiso ezine endiyifumene ngakumbi kumsebenzi wam. Iingcebiso ezimbini zokuqala zisebenza kunoma yikuphi ukuvavanya, ngelixa isibini sesibini sichaza ngakumbi kwii-digital-age experiments.
Isiluleko sam sokuqala xa usenza uvavanyo kukuba kufuneka ucinge ngokungangoko kunokwenzeka nayiphi na idatha eqokelelwe. Oku kubonakala kubonakala kubaphandi abajwayele ukuqhuba iimvavanyo, kodwa kubaluleke kakhulu kulabo abajwayele ukusebenzisana nemithombo emikhulu yedatha (bona isahluko 2). Ngemithombo eninzi ininzi eyenziwa emva kokuba unedatha, kodwa iimvavanyo zichasene: uninzi lomsebenzi makwenziwe ngaphambi kokuba uqokelele idatha. Enye yezona ndlela ezintle zokuziphoqa ukuba ucinge ngokucophelela ngaphambi kokuba uqokelele idatha ukudala nokubhalisa isicwangciso sokuhlalutya kokuzama kwakho apho uchaza ngokucacileyo uhlalutyo oya kuqhuba (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .
Isicatshulwa sam sesibini sobulumko kukuba akukho luvavanyo olulodwa oluya kufezeka, kwaye, ngenxa yoko, kufuneka uqikelele ukuyila uchungechunge lweemvavanyo ezomeleza omnye nomnye. Ndivile le nto ichazwe njengesicwangciso se- armada ; Kunokuba uzame ukwakha iinqwelo zokulwa, kufuneka ukhethe iinqanawa ezincinci ezinamandla ezincedisayo. Ezi zifundo zovavanyo ezininzi ziqhelekileyo kwizengqondo, kodwa zincama kwezinye indawo. Ngethamsanqa, iindleko eziphantsi zezilingo ezithile zedijithali zenza izifundo ezininzi zokuhlola zilula.
Ngenxa yokuba imvelaphi yesiqhelo, ngoku ndiyakuthanda ukunikela iingcebiso ezibini ezicacileyo ngakumbi ekudaleni i-digital age experiments: yenza idatha yeendleko eziguquguqukayo (icandelo 4.6.1) nokwakha imigaqo kwi-design yakho (icandelo 4.6.2).